Abidy - Wikipedia
Mbola ambangovangony amin'ny resaka soratra ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Ny abidy dia ny fitambaran'ireo tarehin-tsoratra amin'ny tenim-pirenena tsirairay avy.
Tenenintsika hoe litera ny eva iray. Ara-teôria, tokony mampiseho feo iray ny litera iray. Ary tokony manana diakritìka ny litera sàsany mba hanana stock litera raha tsy ampy ny isany.
1 Abidy fototra ampiasaina ankehitriny
1.1 Abidy grika
1.2 Abidy latina
1.3 Abidy hebreo
1.4 Abidy sirilika
1.5 Abidy arabo
Abidy fototra ampiasaina ankehitrinyHanova
Ny abidy grika dia abidy manavaka ny renisoratra sy ny zanatsoratra sady ahitana litera efatra amby roapolo, izay natao hanoratana ny fiteny grika nanomboka tamin'ny taonjato fahasivy tal. J.K. hatramin'izao fotoana izao. Io ihany koa no heverina fa abidy antitra indrindra – raha ferana amin'ny famaritana voalohan'ny teny hoe abidy – satria samy manana ny evany ny feo tsirairay. Tamin'ny Andro Taloha dia nampiasaina ho an'ny fanisana amin'ny teny grika ihany koa ny litera, fa voasolon'ny tarehimarika arabo izy ireo. Avy amin'ny abidy fenisianina ny abidy grika. Nahatonga ny fipoiran'ny abidy latina tao Eoropa io abidy io. Fampiasa ho eva amin'ny siansa, amin'ny anaram-boanjavatra amin'ny fizika, amin'ny anaran-kintana ary fikambanam-pirahalahiana sy firahavaviana ny litera grika.
Ny abidy latina na abidy romana dia abidy ahitana litera fototra miisa 26 sady afaka atao sora-baventy na sora-madinika. Mampiasa io abidy io hanoratany ny fiteniny ny ao Eoropa Andrefana sy Eoropa Avaratra ary Eoropa Afovoany. Mampiasa azy koa ireo firenena ivelan'i Eoropa indrindra ireo firenena nozanahin' ny Eoropeana, isan'izany ny ao Amerika Avaratra sy Atsimo sy ny ao Afrika ary ny ao Oseania. Ireto avy ny litera fototra ao amin'ny abidy latina amin'ny endriny soramadinika: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z. Tamin'ny taona 2002 dia ny 39 %n'ny mponina maneran-tany no mampiasa ny abidy latina .
Ny abidy hebreo dia fitambarana litera miisa 22 tsy ahitana zanatsoratra izay anoratana ny fîteny hebreo. Amin’ny fiteny hebreo, io abidy io dia atao hoe אָלֶף־בֵּית עִבְרִי‬ / Alefbet Ivri na האלפבית העברי / Ha-ˈAlefbet ha-Ivri. Tsy misy ny fanavahana ny sorabaventy sy ny soramadinika. Taty aoriana vao nisy marika miendri-teboka atao hoe nikkud izay amantarana ny zanapeo. Vakina avy ankavana miankavia ny soratra hebreo. Ny abidy hebreo no nanoratana ny boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo), izany hoe izy no nanoratana ny fiteny fototry ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly. Izy koa no anoratana ny fitenin'ny Jiosy hafa ankehitriny.
Ny abidy sirilika dia abidy slavy. Ankehitriny izy io dia ampiasaina amin'ny fanoratana ny teny rosiana, okrainiana, belarosiana, rusyn, biolgara, masedôniana ary ny fiteny serba-kroata. Io abidy io koa dia abidy voaterin'ny Firaisana Sovietika ampiasain'ny fiteny tsy slavy toa ireo teny tao Kaokazy sy Siberia ary ny faritra avaratr'i Rosia.
Ny abidy sirilika dia noforonin'i Ohrid sy i Clément tamin'ny taonjato fahasivy, izay nampianarin'ny moanina (na monka) roa, dia i Kyrillos sy i Methodios. Ny fototr'io abidy io dia ny abidy grika. Ny soratra glagôlitika no nampiasaina talohan'ny abidy sirilika.
Ny abidy arabo dia tsy ahitana afa-tsy renisoratra, natao hanoratana ny fiteny arabo sy fiteny hafa koa, ka soratana avy ankavana miankavia. Nisy litera miisa 28 izy tamin'ny voalohany nefa ny fiteny tsirairay izay soratana aminy dia samy nanao fanovana arakaraka ny rafi-peo ao aminy. Tsy manana zanatsoratra hanoratana ny zanapeo ny abidy arabo fa mari-tsoratra sahalahala amin'ny teboka na faingo apetraka eo ambony na ambany na aloha na aorian'ny renisoratra hisolo ny zanatsoratra.
Nanomboka tamin'ny fielezan'ny finoana silamo mantsy dia maro ireo fiteny ankoatry ny arabo, fiteny anoratana ny Kor'any, izay nanomboka nosoratana tamin'io abjady arabo io. Izany no anoratana ny fiteny indo-eoropeana toy ny fiteny persana, ny fiteny kashmiry, ny fiteny sindy, ny fiteny ordoa ary ny fiteny korda. Ampiasaina ao Sina koa io abidy io, indrindra ao amin'ny faritanin'i Xinjiang sy Gansu ary Ningxia, ary amin'ny mponina vitsy anisa izay nandray ny fivavahana silamo (izany no atao hoe "xiao'erjing"). Taloha dia nenti-nanoratra ny fiteny sasany ao Afrika ny abidy arabo: ny fiteny soahily, ny fiteny haosa, ny fiteny oôlôfo ary ny fiteny somaly) ary koa nanoratana ny fiteny torka hatramin'ny taona 1928.
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Alphabet
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Abidy&oldid=999448"
Dernière modification le 29 Desambra 2020, à 15:19
Voaova farany tamin'ny 29 Desambra 2020 amin'ny 15:19 ity pejy ity.